Samsung Galaxy Note 7 oo laga mamnuucay dhammaan duulimaadyada Mareykanka | Androidsis
Samsung Galaxy Note 7 ayaa laga mamnuucay dhammaan duulimaadyada Mareykanka
Dhibaatada gaabiska ah iyo geerida Samsung Galaxy Note 7 ayaa usii socota talaabo talaabo talaabo ah oo ayaamahaba ay socdaan, wararka mid walbaa wuxuu u arkaa mid ka xun shirkada South Korea.
Ka dib markii qaybinta iyo iibinta qalabkan qarxa la joojiyay markii labaad tan iyo markii si rasmi ah loogu bilaabay darsin dal, iyo sidoo kale ka dib markii wax soo saarkeeda la joojiyay Samsung «Sababtoo ah nabadgelyada macaamiisha ayaa ah ahmiyadeena koowaad". Galaxy Note 7 ayaa laga mamnuucay dhamaan duulimaadyada Mareykanka.
1 Galaxy Note 7 waa "shey mamnuucaya halista"
1.1 Cawaaqibta ka dhalankarta amarka
2 Dhamaadka dhamaadka: luminta dhaqaalaha iyo kalsoonida
Galaxy Note 7 waa "shey mamnuucaya halista"
Ilaa shalay, ma jiro isticmaale awood u yeelan doona inuu galo duulimaad kasta oo ka dhaca Mareykanka inta uu sido terminal Samsung Galaxy Note 7 ah. Aaladda waxaa ka mamnuucay dhammaan duulimaadyada Mareykanka waaxda gaadiidka, Maamulka Duulista Federaalka, iyo Maamulka Badbaadinta Dhuumaha iyo Khatarta.
cunt mamnuuc ayaa yiri, aaladda keenta madax xanuunka ugu weyn, khasaaraha dhaqaale iyo aaminaadda shirkadda Samsung, ayaa lagu calaamadeeyay "walxaha halista ah ee mamnuuca ah" iyada oo ku saleysan Heerarka Maaddooyinka Halista ah ee Federaalka.
Shakhsiyaadka iska leh aaladda Samsung Galaxy Note 7 ma qaadan karaan aaladda shaqsigooda, shandadaha ay wataan, ama shandadaha la hubiyey ee duulimaadyada, ka imanaya, ama gudaha Mareykanka. Mamnuucidan waxaa kujira dhamaan aaladaha Samsung Galaxy Note 7.
Laga bilaabo maanta oo Sabti ah, Oktoobar 15 markay tahay 0 am. (Waqtiga Xeebta Bariga Mareykanka) ma jiro Galaxy Note 7 oo awoodi doona inuu "fuulo" diyaarad kasta oo Mareykanka ka jirta, xitaa haddii la damiyay. Ma jiro nooc ka mid ah qalabka la sheegay in lagu qaadi karo qof rakaab ah, ama shandado gacmeed mana la hubin karo, sida ay ku tilmaantay Waaxda Gaadiidku amar deg deg ah.
"Waxaan garowsanahay in mamnuucida taleefanadan shirkadaha diyaaradaha ay noqon doonto mid aan ku dhib badneyn rakaabka qaar, laakiin amaanka qof walba oo diyaarada saaran waa inuu muhiimada siiyaa" ayuu yiri xoghayaha gaadiidka Anthony Foxx. "Waxaan qaadeynaa tillaabadan dheeriga ah, maadaama hal shil diyaarad gudaheeda ah ay ka dhigan tahay halista sare ee dhaawaca shaqsiyeed oo halis ah ayna nafo badan galayaan."
Cawaaqibta ka dhalankarta amarka
Cawaaqib xumada ka dhalan karta qof kasta oo isku daya inuu ka dhuunto xayiraadda saaran ayaa ka sii daran. Sidaa darteed, qof kasta oo isku daya inuu soo bandhigo Samsung Galaxy Note 7 diyaarad, wuxuu arki doonaa sida loola wareego terminal-ka, marka lagu daro inuu ganaax wajahayo. Cawaaqibta ayaa ka sii xun haddii la gelayo shandadaha la hubiyey. Kiiskan, isticmaaleyaasha waxaa lagu ciqaabi karaa dambi ahaan, marka lagu daro inaad la kulanto ganaaxa u dhigma.
Dhamaadka dhamaadka: luminta dhaqaalaha iyo kalsoonida
Xayiraadda guud ee lagu soo rogay nooc kasta oo Samsung Galaxy Note 7 ah oo duulimaad ka ah Mareykanka ayaa timid dhowr maalmood ka dib shirkadda South Korea si joogto ah u joojiso wax soo saarka kana codsadaan shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa wax iibiya dukaamada adduunka inay joojiyaan iibinta Galaxy Note 7 aaladaha beddelka qaarkood ayaa iyaguna gubanayay.
Waxaan la shaqeyneynaa hay'adaha sharciyeynta ee ku habboon si loo baaro kiisaska dhowaan la soo sheegey ee ku lug leh Galaxy Note 7. Sababtoo ah nabadgelyada macaamiisha ayaa ah mudnaantayada koowaad, Samsung waxay weydiin doontaa dhammaan hawlwadeenada iyo la-hawlgalayaasha tafaariiqda adduunka inay joojiyaan iibinta iyo bedelka Galaxy Note 7 inta baaristu socoto.
Waxaan weli naga go'an inaan si taxaddar leh ula shaqeyno hay'adaha sharciyeynta ku habboon si aan u qaadno dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah xallinta xaaladda. Macaamiisha leh aaladda asalka ah ee Galaxy Note 7 ama bedelka qalabka Galaxy Note 7 waa inay damiyaan oo ay joojiyaan isticmaalka aaladda kana faa’iideysta ilaha jira.
Sida muuqata, Samsung wali ma ogaan waxa cilada ah ee saameysa aaladaha cusub, laakiin ugu dambeyntii waa lagu qasbay ka tag wax soo saarka Galaxy Note 7, terminaal sababi lahaa, xilligan, ugu yaraan 2.300 milyan oo doolar oo ah khasaare dhaqaale oo shirkadda soo gaadha, marka lagu daro inuu si weyn u dhaawacay sumcadeedii bulshada. Xaqiiqdii, sahan dhowaan la sameeyay ayaa muujinaya taas 40% dadka isticmaala Samsung waxay dooran doonaan terminal ka nooc kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Galaxy Note 7 ayaa laga mamnuucay dhammaan duulimaadyada Mareykanka